Shabaab oo xukun dil ah ku fuliyay afar nin oo uu ku jiro nin fududeeyay dilkii Axmed Godane | Baydhabo Online
Shabaab oo xukun dil ah ku fuliyay afar nin oo uu ku jiro nin fududeeyay dilkii Axmed Godane
Ururka Al Shabaab, ayaa gelinkii dambe ee Jimcihii xukun dil ah ku fuliyay afar nin oo lagu eedeeyay inay la shaqaynayeen dhinacyada dagaalka kula jira Shabaabka hubeysan, ee dagaalka ka wada Somaliya.
Raggan, ayaa waxaa lagu dilay Deegaanka Buulo Fuulaay ee Gobolka Baay, waxaana isugu soo baxay goobtii lagu dilay boqolaal ka mid ah dadka deegaanka.
Qaadiga Maxkamadda Ururka Al Shabaab, ayaa raggaasi ku eedeeyay inay la shaqaynayen Sirdoonada Mareykanka, Somaliya iyo Kenya, waxaana uu xukunkoodu ku sheegay dil.
Qaadiga Maxkamadda, ayaa sheegay afartaasi nin in ay qirteen eedeymihii lagu soo oogay, isla-markaana ay Maxkamaddu ku xukuntay in saddex ka mid ihi la toogto, midka kalana la gowraco.
Afarta nin ee la xukumay, ayaa kala ah:-
Xasan Diiriye Cismaan 42 jir
Xuseen Nuunow Nageeye 36 jir
Muxudiin Hiraab Axmed 27 jir
Maxamed Aadan Nuur Xasan 26 jir.
Qaadiga waxaa uu sheegay Maxamed Aadan Nuur Xasan in uu la shaqaynaayay CID-da Mareykanka, isla-markaana uu fududeeyay duqayntii lagu dilay Amiirkii hore ee Al Shabaab, Sheekh Mukhtaar C/raxmaan (Abuu Zubeyr), balse ay Somalidu u taqaanay Axmed Cabdi Aw Maxamed (Godane). Duqayntan waxay 1-dii September ee sanadkii 2014-ka ka dhacday Gobolka Shabellaha Hoose.
Ninkan waxaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu fududeeyay duqayn lagu dilay Yuusuf Dheeg iyo nin kale oo magaciisa lagu sheegay Cabdi Shakuur, oo ka tirsanaa Ururka Al Shabaab.
Muxudiin Hiraab Axmed waxaa lagu eedeeyay inuu la shaqaynaayay Sirdoonka Kenya, si uu macluumaad kaga keeno raggii ka dambeeyay weerarkii Westgate lagu qaaday 21-kii September ee sanadkii 2013-ka. Muxudiin waxaa kaloo lagu eedeeyay inuu masuul ka ahaa duqayntii lagu dilay Aadan Axmed Isaaq (Aadan Garaar), oo bishii March ee sanadkii hore ka dhacday duleedka Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo.
Xuseen Nuunow Nageeye waxaa lagu eedeeyay inuu la shaqaynaayay Sirdoonka Dowladda Somaliya, waxayna Shabaabku sheegeen in loo soo diray macluumaad inuu ka keeno Saraakiil ka tirsan Shabaabka, oo deganaa Degmada Diinsoor ee Gobolka Baay.
Xasan Diiriye Cismaan, ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu la shaqaynaayay Sirdoonka Kenya, isla-markaana uu Gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ka sameeyay unugyo basaasiin ah, si ay xoggo kaga soo gudbiyaan Shabaabka ku sugan Goboladaasi.